Mahafaly ny fo sy mampahazava ny maso
"Mahitsy ny fandidian'i Jehôvah, mahafaly ny fo; madio ny didin'i Jehôvah, mampahazava ny maso" - Sal. 19:8:
Fahazavana mitsilopilopy ihany no ananantsika raha mitaha amin'ny velaran'ny lalàn'Andriamanitra (...). Maro ireo olona milaza fa mino ny fahamarinana fototra ho an'izao andro farany izao, kanefa mitondra tena toy ny hoe tsy hitan'Andriamanitra ny tsi-fanajany sy ny fanaovany tsinontsinona ny foto-kevitry ny lalàny masina. Ny lalàn'Andriamanitra no fanehoana ny sitrapony, ary amin'ny alalan'ny fankatoavana ny lalàna no aneken'Andriamanitra ny taranak'olombelona ho zanany. (...)
Sorona mandrakizay no nataon'Andriamanitra mba ho tafaverina amin'ny laoniny eo amin'ny olona ny endrik'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fisafidianana ny hankatò ny lalàn'Andriamanitra rehetra. Tena lehibe ny famonjena antsika, satria zavatra goavana no natao tamin'ny alalan'ny fahamarinan'i Kristy, mba hadio sy ho tanteraka ary hanana izay ilaintsika rehetra isika. (...) Raha manaiky hitandrina ny lalàn'Andriamanitra ny olona, noho ny finoana an' i Kristy, dia hanana anjara amin'ny haren'ny lanitra izy. — RH, 04 Febroary 1890
Sokafy ny mason'ny sainao; jereo ny hatsaran'ny firindrana misy eo amin'ny lalàn'Andriamanitra izay mifehy ny natiora. Ary aoka ho talanjona ianao ka hankalaza ny Mpahary anao, dia ilay Mpanapaka ny lanitra sy ny tany. Banjino Izy, amin'ny alalan'ny masom-pinoanao, dia Izy ilay miondrika mijery anao (...) Ny finoanao an' i Jesôsy dia hanome anao hery hoenti-manatanteraka ny fikasanao rehetra sy tsy fiovaovana eo amin'ny toetrao. Ny fahasambaranao, ny fiadananao, ny fifalianao ary ny fahombiazanao rehetra eo amin'izao fiainana izao dia miankina amin'ny finoanao marina tokoa an'Andriamanitra. Hanosika anao hankatò tsy hitaredretra ny didin'Andriamanitra izany finoana izany. Ny fahalalanao sy ny finoanao an'Andriamanitra no fiarovana mafy indrindra hanakana anao tsy hanao asa ratsy, ary antony manosika anao hanao ny asa tsara rehetra. Minoa an'i Jesôsy, Ilay mamela ny helokao, Ilay maniry ny hahasambatra anao any amin'ny fitoerana izay omaniny ho anao. Faniriany ny hahatsapanao ny fanatrehany eo amin'ny fiainanao. Faniriany koa ny hanananao ny fiainana mandrakizay sy ny satroboninahitra be voninahitra. — YI, 05 Janoary 1887
Misy valisoa lehibe ny fitandremana ny didin'Andriandanitra, na dia eto amin'izao fiainana izao aza. Tsy manameloka antsika ny feon'ny fieritreretantsika. Tsy mandrafy an'Andriamanitra ny fontsika, fa vita fihavanana Aminy kosa. — ST, 22 Septambra 1898